amathayili omshini enza imishini yensimbi yangaphambili China Manufacturer
Botou Xianfa Roll Forming Machine Factory [Hebei,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Amakethe Omkhulu: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:91% - 100% Izikweletu:CE, ISO9001 Incazelo:Ukwenza Amathayili Omshini,Uhlu Lomshini we-Zhauns,Izinsimbi Zangaphambili Zensimbi
Home > Imikhiqizo > Umshini Okhanyayo Wokubumba Tile > I-Afrika Type Glazed Tile Roll Ukwenza Umshini > amathayili omshini enza imishini yensimbi yangaphambili
amathayili omshini enza imishini yensimbi yangaphambili
USD 12000 - 23500 / Set/Sets
I-Model No.: 28-200-800
Machine Type: Machine Tiles Making
Name: Steel Former Equipment
Working Speed: 0-2m/min
Indawo Yomsuka: IBotou City, eChina
Inqubo Yezimboni Nokuchazwa Kwengxenye
Umshini Wokwakha Amashidi We-Metro Roaling Sheet Metal
1. I-Manual Uncoiler:
Ukusetshenziswa: Kusetshenziselwa ukusekela ikhoyili yensimbi nokuyifaka ku-in way ngendlela eguqukayo. Ikhoyili yensimbi ayimboziwe ngesandla.
Ukulayisha umthamo: 5T
Ububanzi bangaphakathi: 500-508mm
2. Ukondla Ithebula:
Beka izinto ezingavuthiwe (ipuleti lensimbi) ogwini ukuze wakhe futhi usebenze, kungaqinisekisa ukuthi imikhiqizo ihlanzekile. Ukufana nakho konke ukufana. Sicela ubheke kumthethonqubo wokusebenza ukuze wazi umsebenzi we-iron angle.
3. Umshini Odala Wokuqamba:
Indwangu yama-roller: i-45 # insimbi, i-roller evele ngaphandle kokupholisha, i-plating kanzima. Umphezulu ophucuziwe kanye nokwelashwa okushisa okubhekisele ngakubumba nakho kungagcina ukubumba. Ipuleti elingaphezulu libushelelezi futhi akukho lula ukuthi liphawulwe lapho ligxivazwa
4. IHydraulic System:
Amandla: 11KW, Amafutha e-Hydraulic: 40 #.
Amafutha e-Hydraulic ethangini likawoyela we-hydraulic, iphampu idonsa umshini wokusika ukuze uqale umsebenzi wokusika.
5. I-Shearing Mechanism: Yamukela i-hydraulic drive nendawo ezenzakalelayo yokunquma ubukhulu kanye nokusika imikhiqizo okuhlosiwe. Indwangu yama-blade: i-Cr12, iqeda ukwelashwa.
6. Ikhomishini Yokulawula Amakhompyutha: Ubude bezinhlamvu eziqondiwe buyashintshwa futhi idijithi yalo ingashintshwa. Imodi Ehlanganisiwe inezindlela ezimbili: ezenzakalelayo nezezandla. Uhlelo kulula ukusebenzisa nokusebenzisa. Plc: EURA
1. Sinabo ochwepheshe bokulayisha
Ngonyaka owodwa, futhi sizohlinzeka ngokusekelwa kwezobuchwepheshe kokuphakanyiswa kwemishini.
2. Ukufakwa Nokushaja
Umthengi ukhokha zonke izindleko ngesikhathi sokufaka phesheya,
(kufaka phakathi izindleko zokudla, indawo yokuhlala kanye namathikithi endiza ojikelezayo, njll.)
Ngaphezu kwalokho, khokha uxhaso ku-60USD / ngosuku kuze kufakwe.
Muva nje, imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni angaphezu kwezi-80 nezifunda emhlabeni jikelele
futhi sigcine ubudlelwano obuhle bokusebenzisana namakhasimende
Izigaba zomkhiqizo : Umshini Okhanyayo Wokubumba Tile > I-Afrika Type Glazed Tile Roll Ukwenza Umshini
Isitayela saseNigeria iRoof Glazed Tile Machine Machineing
Umshini Wokwenza Amashidi We-Aluminium Roofing Sheet Roll
Umshini Wokwenza Amatshe Wensimbi Ebunjiwe
Umshini okhanyayo we-Colour Roof Panel Making Machine
Amashidi we-Metal Sheet Glazed Tile Machine Machine
I-EC Igqokile Ukushiswa Kweshidi Elincane Lokwenza Umshini Wophahla
Wall Sheet Steel Tile Corrocated Roll Roof Machines
Ukwenza Amathayili Omshini
Uhlu Lomshini we-Zhauns
Izinsimbi Zangaphambili Zensimbi
Umshini Wokwenza Amashidi Omshini
Umshini Wokwenza Amashidi Oshidi
Amathayili Omshini Wokusika
Umshini Wokwenza Amashidi Oshintshiwe
C Ukwenza Umshini